Dukaanka Apple ee ku yaal Mexico wuxuu furi doonaa Sabtida soo socota, Sebtember 24 | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan ku jirnaa balaarin buuxda dukaanada Apple ee aduunka oo dhan iyo mudo dheer ka dib oo dadka isticmaala Mexico ay sheeganayeen dukaankooda rasmiga ah ee shirkada tufaaxa la qaniinay, hada waxay ugu dambeyn awoodi doonaan inay yeeshaan dukaanka ugu horeeya ee muhiimka ah. Dukaamadan ayaa aad uga badan bakhaar si ay awood ugu yeeshaan helitaanka aaladaha iyo inta kale ee sumadda sumadda tufaaxa qaniinay tan iyo waxay soo bandhigaan Genius Bar, koorsooyin, xisaabin yar iyo waxqabadyo loogu talagalay dadka isticmaala in aadan ku raaxeysan doonin haddii aadan haysan dukaan rasmi ah. Sababtaas awgeed, marar badan waxaan dhahnaa inay aad uga badan yihiin dukaamada fudud ee dhammaan isticmaaleyaashaas sugayey muddada dheer inay haystaan ​​dukaan rasmi ah.
Sida iska cad ikhtiyaarka ah inaad ku iibsato badeecada dukaanka rasmiga ah ee Apple inkasta oo ay leeyihiin iibiyayaal Premium ah oo la heli karo had iyo jeer waa tixgelin iyo in ka badan dhammaan dadka isticmaala shirkadda. Hadda aagga ganacsiga Santa Fe, ee Magaalada Mexico waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinkaas. Cinwaanka saxda ah ee dukaanku waa: Avenida Vasco de Quiroga 3800, Lomas de Santa Fe, Ergada Cuajimalpa iyo bisha Sebtember 24 waxay si rasmi ah albaabada u furi doontaa.
Ku saabsan dukaanka wax yar ama wax yar oo aan soo koobi karno marka hore maadaama inta badan ay aad isugu egyihiin Kiiskan kooxda mas'uulka ka ah naqshadeynta ayaa la mid ah kuwii fuliyay dukaanka San Francisco gudaha Mareykanka Tani waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee dukaamada rasmiga ah ee Apple ayaa laga furay Mexico waxaana la rajeynayaa inuusan noqon doonin kii ugu dambeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaanka Apple ee ku yaal Mexico wuxuu furi doonaa Sabtida soo socota, Sebtember 24
Dhab ahaantii ma dukaanka rasmiga ee Apple ama iibiyaha Apple sida 3 ama 4 ee ka jira Monterrey NL?
Dukaanka rasmiga ah ee Apple, ma jiraan wax iibiyayaal ah.